Horudhaca xilli-ciyaareedkii labaad ee Ted Lasso wuxuu u oggolaanayaa Apple TV + inuu dhigo rikoodh cusub oo dhagaystayaal ah | Waxaan ka socdaa mac
Ted Lasso Season XNUMX Premiere wuxuu u oggol yahay Apple TV + inuu sameeyo Diiwaan Muuqaal Cusub
Apple, sida inta kale ee barnaamijyada fiidiyowga qulqulaya, waligood ma dhawaaqo kuwa tirooyinka dhagaystayaasha ee barnaamijyada TV-yada iyo filimada kala duwan ee lagu sii daayo barnaamijyadooda, markaa had iyo jeer waa inaan ku tiirsanaano cabbirada shirkadaha dhinac saddexaad, tirooyinka aan waligood ku raaci doonin xaqiiqda.
Sida laga soo xigtay Deadline, bilowgii xilli ciyaareedkii labaad ee Ted lasso Jimcihii la soo dhaafay, waxay u oggolaatay adeegga fiidiyowga ee Apple jebi dhammaan diiwaanadii hore, Rikoor la gaarey bilowgii xilli ciyaareedkii labaad ee Addoon.
Apple TV + ayaa garaacday rikoorkeedii daawashada ee ugu sareeyay labadaba jimcaha iyo dhamaadka usbuuca. Sida laga soo xigtay Deadline, xilli ciyaareedkii labaad ee ugu horreeyay waxaa daawaday 6 jeer dad ka badan intii xilli ciyaareedkii ugu horreeyay la bilaabay.
Xaqiiqdii, xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ma ahayn mid ka mid ah sharadyada ugu waaweyn ee Apple, in kastoo muddo ka dib ay noqotay taxanihii ugu guusha badnaa ee ka taagna masraxa, si fiican kor Bandhigga Subaxa, Sharadka weyn ee Apple ee fiidiyoowga fiidiyowga ah.
Isla warbaahintani waxay sheegaysaa in isticmaaleyaashu kaliya aysan marin xilli-ciyaareedkii labaad ee Ted Lasso, laakiin tan iyo markii ay ku sugnaayeen barta, waxay ka heleen sii-deyntii ugu dambaysay ee madal sida majaajillada muusikada Schmigadoon, jirka o Quusitaanka khuraafaad.
Jimce walba Apple ayaa soo bandhigi doona fiidiyow cusub xilli ciyaareedkan labaad, xilli labaad oo ka kooban 12 qaybood, sidaa darteed qaybtii ugu dambaysay waxaa la sii deyn doonaa Oktoobar, maalmo ka dib markii ugu horreysay ee qaybtii ugu horreysay ee taxanaha 'Fundación', ay ka mid yihiin sii deynno kale oo waaweyn oo ay Apple qorsheysey bilaha soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Ted Lasso Season XNUMX Premiere wuxuu u oggol yahay Apple TV + inuu sameeyo Diiwaan Muuqaal Cusub
Sida loo warshadeeyo Apple Watch
Calaamadee Ronson farxadaha iyo dhibaatooyinka abuurista taxanaha '' Daaw codka 'ee Apple TV +